French Revolution mabhuku
French Revolution chirevo #1
French Revolution chirevo #2
French Revolution chirevo #3
French Revolution chirevo #4
French Revolution chirevo #5
French Revolution chirevo #6
Zvinyorwa zveFrench Revolution
Mibvunzo yeFrench Revolution nyaya
French Revolution mifananidzo
French Revolution Vanyori venhau
Mepu yeFrench Revolution
French Revolution ndangariro yemubvunzo - zviitiko 1789-91
French Revolution ndangariro yemubvunzo - zviitiko 1792-95
French Revolution ndangariro yemubvunzo - zviitiko kune 1788
French Revolution yekurangarira mibvunzo - mapoka
French Revolution ndangariro yemibvunzo - mazano
French Revolution ndangariro yemibvunzo - vatungamiriri
French Revolution ndangariro yemubvunzo - mazwi (I)
French Revolution ndangariro yemubvunzo - mazwi (II)
French Kwemusoro memory memory - mazwi (III)
French Revolution ndangariro dzinodzoka
Mataurirwo echiFrench Revolution
French Revolution Mibvunzo #1
French Revolution Mibvunzo #2
French Revolution Mibvunzo #3
French Revolution Mibvunzo #4
French Revolution Mibvunzo #5
French Revolution Mibvunzo #6
French Revolution Quiz yevanotanga
French Revolution inonyuka
French Revolution Misoro
French Revolution Iye ndiani
ChiFrench Revolution izwisearch - pfungwa
French Revolution izwisearch - zviitiko
French Revolution izwisearch - vanhu
ChiFrench Revolution izwisearch - nzvimbo
ChiFrench Revolution izwisearches
The French Revolution takanga tiine zvese zvatino shamwaridzana neanopandukira - mhirizhonga maroja, vanopokana uye michina-inocheka.
Kunyangwe isiri yekutanga shanduko yenguva dzazvino, iyo French Revolution ndiyo yave iri nhanho iyo dzimwe shanduko dzinoyerwa. Kurudziro yezvematongerwo enyika neyemagariro mu18th century France yakadzidziswa nemamiriyoni evanhu - kubva kuvadzidzi kusvika kumusoro kuvadzidzi vechikoro chesekondari. The dutu reBastille panaJulayi 14th 1789 yakave imwe yenguva dzekutsanangurwa kwenhoroondo yeWestern, chinangwa chakakwana chevanhu vari mukuchinja. Varume nevakadzi veanoshandura France - Louis XVI, Marie Antoinette, Marquis de Lafayette, Kudza Mirabeau, Georges Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre nevamwe - vakafundwa, kuongororwa nekududzirwa. Vanyori vezvakaitika kare vakapedza anopfuura mazana maviri emakore vachiongorora Shanduko yeFrance, vachizama kusarudza kana kwaive kusvetuka kwekufambira mberi kana danho rekuva barbarism.
Pakutanga kutarisa, zvikonzero zveRevolution yeFrance zvinoita kunge zvakananga. Pakupera kwezana remakore re18th, vanhu veFrance vaive vatsungirira mazana emakore ekusaenzana uye kubatwa. Hurumende hwaive hwakawanda hwaida Yetatu Estate, ivo vanhuwo zvavo, kuti vaite basa rayo, vachitakura mutero. Mambo vaigara vari voga vari vega kuVersailles, wake hurumende yeumambo mhedzisiro mune dzidziso asi isingabvumiki mune chokwadi. Chero yenyika mari yaisave isina chinhu, yakaderedzwa nekusabatwa zvakanaka, kushaya simba, huwori, mari yakawanda uye kutora chikamu muhondo dzekunze.
Pakusvika 1780s, ivo vamambo vamambo vaitsvaga nemoyo wose kuita shanduko yemari. Izvo zvakatanga seine nharo pamusoro pekutsanangurwa kwemitero yekuchinjisa munguva pfupi zvangoita morifizi yekuchinja kwezvematongerwo enyika uye bumbiro. Kunetsana pa Estates-General pakati-1789 yakatungamira kuumbwa kweNational Assembly, yekutanga yehurumende dzakati shanduko. Zviitiko izvi, pasina kutyisidzira kana kudeura kweropa, zvakaratidza kuti shanduko ine rugare musimba yakakwanisika. Mumavhiki anouya, iro ruzhinji rwechisimba chinozivikanwa - muParis, mumaruwa uye paVersailles pachayo - yakanyorwa pamablooderform yekuuya.
Alpha Nhoroondo yeFrance Revolution webhusaiti yakazara yakazara-bhuku zvinyorwa zvekudzidza zviitiko muFrance mukupedzisira 1700s. Iyo ine anopfuura anopfuura 500 akasiyana epakutanga uye sekondari masosi, kusanganisira yakadzama misoro yenyaya, zvinyorwa uye mifananidzo inomiririra. Webhusaiti yedu inewo zvinyorwa zvekureva se map uye mamepu epfungwa, nguva, glossaries, mumwe 'ndiani neruzivo pa nhoroondo uye vanyori venhoroondo. Vadzidzi vanokwanisa zvakare kuyedza ruzivo rwavo uye nekurangarira nemhando dzakasiyana dzezviitiko zvepamhepo, zvinosanganisira mibvunzo, crosswords uye manzwi emashoko.
Kunze kwekunze kwekutanga zvinyorwa, zvese zvirimo paAlpha Nhoroondo zvakanyorwa nevadzidzisi vanokwanisa, vanyori uye vanyori venhoroondo. Mamwe ruzivo pane ino webhusaiti uye avo vanobatsira vanogona kuve akawanikwa pano.
Iyi nzvimbo yeFrench Revolution ine zvinyorwa, zvinyorwa uye maonero ezviitiko muFrance pakati 1781 uye 1795. Ino saiti yakagadzirwa uye inochengetwa neAlpha Nhoroondo. Iyo ine 228,547 mazwi mune 353 mapeji uye yakagadziriswa kwekupedzisira munaJuly 31st 2019. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanyira yedu FAQ peji kana Mashandisiro Ekushandisa.